नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआर बनाउन ६ वटा कम्पनी छानिए ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआर बनाउन ६ वटा कम्पनी छानिए !
काभ्रेको धुलिखेलदेखि राजधानीको नागढुङासम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेलको संभाव्यता अध्ययनका लागि आधा दर्जन विदेशी परामर्शदाता छनौट भएका छन् । छनौट हुनेमा चिनियाँ, भारत, कोरिया, टर्की र जापानका परामर्शदाता रहेका छन् । आशयपत्र पेश गरेर संक्षिप्त सुचिमा चाइना मेशिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन, चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, निप्पोन कोइ कम्पनी लिमिटेड, जापान, राइट्स इण्डिया लिमिटेड, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन सिउल र युकसेल प्रोजे युकसलवारी टर्की छन् ।
छनौट भएका कम्पनीले आउदो ३१ दिनभित्र परामर्श सेवाका लागि बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले जानकारी दिए । बोलपत्र पेशपछि डीपीआरका लागि परामर्शदता छनौट गरिने उनले बताए । धुलिखेलदेखि नागढुङासम्म मेट्रोरेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवे(डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदातालाई ३१ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्न बोर्डले भनेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने निर्णय गरेको थियो ।लगानी बोर्डले नै गठन गरेको राािष्ट्रय योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने तत्कालिन सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधान नेतृत्वको कार्यदलले पहिलो चरणमा नागढुंगा कलंकी कोटेश्वर धुलिखेल मेट्रोरेल बनाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा बोर्डले रेलका लागि प्रारम्भीक काम थालेको हो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार भैसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको खोजी हुनेछ ।
मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको कुल लागत १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जमिनमाथी पुल निर्माण गरेर मेट्रोरेल सञ्चालन गरिनेछ । एलेटेटेड ट्रयाक(पुल) माथी रेल गुडाउने प्रबिधी अन्तर्गत मेट्रो रेलको निर्माण गर्न लागिएको हो । मेट्रो रेलहरु व्यवसायीक रुपले सञ्चालन गर्न कठिन हुनेगरेको छ । त्यसैले मेट्रो रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीलाईसरकारले केहि अनुदान वा सहुलियतको सुबिधा उपलब्ध गराउनेछ । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केहि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुले केहि बर्ष पहिले नै मेट्रो रेल निर्माणका लागि भन्दै रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका थिए ।